Siidaan Goota Oromoo B.Jen.Taaddasaa Birruu Boru eebbifama. Kichuu
HomeAfaan OromooNewsSiidaan Goota Oromoo B.Jen.Taaddasaa Birruu Boru eebbifama.
Yaadannoo Gootaa: Siidaan Goota Oromoo B.Jen. #Taaddasaa_Birruu Boru eebbifama.
Kan sabaaf jiraatee wareegame akkanatti #kabajaan bara baraan yaadatama. #Ergamtuun diinaas #qaanyiin yaadatamti.
Hayyuun akkatti dubbata fakkeessitoota kaneen nurraa dhisii https://t.co/owILzDufnD pic.twitter.com/XCuJ9gtw1p
— Kichuu (@kichuu24) May 24, 2019
Siidaa Ganaraal Taaddasaa Birruu Magaalaa Fichee https://t.co/9ToBe2C2qi pic.twitter.com/fgc9ygyb1h
— Kichuu (@kichuu24) May 22, 2019